ပုလ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ - သတင်း
ဒါပေမယ့်ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့မျှော်လင့်ချက်နောက်ကွယ်ကဘာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး: သူရဲဘာလဲ လူတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကိုမည်သို့တင်ပြသင့်သနည်း။ ပြီးတော့သူဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။
ချာလီ၊ ၂၅ နှစ်
ငါအားကစားသမားတကယ်ကောင်းစွာပုလ် embody ထင်ပါတယ်။ သူတို့သည်စိတ်ပိုင်းနှင့်ကာယပိုင်းအရခိုင်မာတောင့်တင်းပြီးသူတို့သည်ပန်းတိုင်များထားရှိကြသည်။
လူမှုမီဒီယာများကအမျိုးသားများသည်သူတို့၏ခံစားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်
ငါအရှိဆုံးလေးစားသောလူအမျိုးအစားများမှာသူတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြရန်မကြောက်သောသူများဖြစ်သည်။ ငါကလူတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်လုပ်နိုင်သောသတ္တိအရှိဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြီး၊ ယောက်ျားများသည်၎င်းကိုလုပ်နိုင်သည်ကိုမြင်ရခြင်းက ၀ မ်းသာပါသည်။
ငါထင်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ပုလ်ဆီသို့ ဦး တည်နေသောကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ selfie ၏မြင့်တက်သံသယယောက်ျားတွေအပေါ်အရင်ကထက်ပိုကောင်းကြည့်ဖို့ပိုပြီးဖိအားပေးထားပါတယ်နေစဉ်, ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုမျက်နှာနှင့်မျက်နှာလုပ်ဖို့မလိုဘဲသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုပွင့်လင်းပြောဆိုရန်အဘို့အလည်းအများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Kardashians ၏အသက်အကြီးဆုံး
တွမ်၊ ၂၂ နှစ်
ငါ laddishness ဖြစ်ကောင်းပုလ်၏အဆိုးဆုံးစရိုက်များတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောချင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအလွန်ကောင်းကောင်းမဖြတ်နိုင်ပါ၊ ထိုသို့သောအပြုအမူမျိုးသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုမရည်ရွယ်ဘဲထားလျှင်ပင်လူများကိုမှားယွင်းစေနိုင်သည်။
ငါထင်တာကတော့လူတွေဟာဒီနေ့သူတို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်လိုပုံပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုပိုပြီးသတိထားမိလာတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် 'ပုလ်' ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြလိုပါက၎င်းသည်သူတို့အတွက်လွယ်ကူစေသည်။
ဂန္တ ၀ င်မုတ်ဆိတ်မွှေးမွှေးထားသောဗြိတိသျှ Genting သည်ပုဂ္ဂုလ်အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကတော့ဒီဥပမာကောင်းတစ်ခုပဲ။ သူကတကယ့်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့ကောင်လိုထင်ရပြီးသူဟာမင်းအတွက်အမြဲတမ်းတံခါးဖွင့်ပေးမယ်လို့ငါထင်တယ်။
ပုလ်, ကျနော့်အမြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူကို dictate နိုငျသောငါတို့အတွင်းရှိဘိုးဘေးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှကျေးဇူးတင်စကားဖွံ့ဖြိုးသောအရာတစ်ခုခုပါပဲ။
ငါ့အဘို့, ပုလ်၏အပြုသဘောဆောင်စရိုက်များစောင့်ရှောက်မှု, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အလုပ်ကျင့်ဝတ်နှင့်နားလည်မှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်အားလုံးအကြောင်းကိုဖြစ်သင့်သောအရာကိုပါပဲ။ ကျနော်တို့ယောက်ျားတော့ဘူးရန်လိုဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ငါမလိုချင်သလောက်, ငါသင်သိသည်၎င်း၏အများဆုံးပုံစံကိုသဘောအရပုလ်သတ်မှတ်ရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်, အလုပ်လုပ်ထွက်နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုကြည့်ရှုသူကိုအားကြီးသောယောက်ျား။
အဆိုးရွားဆုံးပုံစံတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်သည်ဟုခံစားရစေရန်ပုလ်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မအေးမြပါ။ ငါကငါတနေ့ကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ရာတစ်ခုခုရဲ့ကျားမမညီမျှမှုနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်ကြဘူး။
ပုလ်တစ် ဦး ချင်းစီဖြင့်အစားထိုးလျက်ရှိသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါပုလ်လူကိုဖော်ပြရန်တော်တော်အသုံးမကျသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အချိန်ကောင်းတွေပြောင်းလဲသွားပြီ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးစီမံရမယ်ဆိုတာကိုပိုပြီးပညာတတ်ဖြစ်လာတယ်။
အမျိုးသားတစ် ဦး သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြသရန်မကြောက်ရွံ့သင့်ပါ
ငါ့အတွက်, ပုလ်ယောက်ျားသည် * လက်ရှိပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုအညီလူဖြစ်သင့်သောအရာကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယခုအချိန်တွင်ငါယောက်ျားသည်ဖြစ်ခြင်းအားလုံးစိတ်ခံစားမှုပြခြင်းနှင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အဆင်ပြေဖြစ်ဖို့ပဲထင်ပါတယ်။
ငါတီ Hardy သူပုလ်နှင့်ဆက်စပ်သောအစဉ်အလာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များအားလုံးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူလည်းသူ့ကိုယ်သူဖော်ပြဆီသို့အမှန်တကယ်တိုးတက်သောသဘောထားကိုရတယ်ရဲ့ 2016 ခုနှစ်မှာပုလ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ၏အကြီးအဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။
Tom Hardy ကသူ၏လိင်အကြောင်းစာနယ်ဇင်းများနှင့်ဆွေးနွေးရန်ငြင်းဆန်သည့်အချိန်ကိုမှတ်မိပါသလား။ yeah ငါတော်တော်လေးအေးဆေးထင်ခဲ့တယ်။
ဒန်နီ၊ ၂၄ နှစ်
Hmm, ငါပုလ်သည်အဘယ်အရာကိုတကယ်မသေချာဘူး - ဒါခက်ခဲပါတယ်! ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လား
ဒေးဗစ်ဂန်ဒီနှင့်ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းတို့သည် 'စုံလင်သောလူသား' နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးကိုရေးဆွဲထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ, သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးပဲလူကလေးပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအလွန်အကျွံရှိသောလူတစ် ဦး အနေနှင့်မရောထွေးပါစေနှင့်
တွမ်၊ ၁၉ နှစ်
လူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်စိတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့၏စွမ်းအားနှင့်ခွန်အားဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့မင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသိပ်မကြီးလွန်းတာမဖြစ်ဖို့သတိထားရမယ်၊
ငါပုလ်ဇွဲ, ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ယဇျပူဇျောကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ငါသိသမျှအကောင်းဆုံးလူတွေကဒီကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
Lynx ၏ 'Men in Progress' စီးရီးသည်ပုလ်ဝန်းကျင်နှင့်ဒဏ္masာရီပုံပြင်များကိုဖုံးကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဗီဒီယိုများသည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြမှု၏အရေးကြီးပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့် 'Find your Magic' လှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။